Kitra – «Mondial U17:hiady ny medaly alimo sisa i Mali | NewsMada
Kitra – «Mondial U17:hiady ny medaly alimo sisa i Mali
Adin’ny samy Eoropeanina ny famaranana hiadiana ny ho tompondaka eran-tany, amin’ny baolina kitra, sokajy U17, tanterahina any Inde. Hifandona amin’izany i Angletera sy i Espaina. Nifarana teo amin’ny lalao manasa-dalana ny nofinofin’ny boaikely malianina. Ny fiadiana ny medaly alimo sisa handrandrain-dry zareo, amin’ity fifaninanana ity.
Resin’i Espaina, tamin’ny isa 3 no ho 1 teo amin’ny manasa-dalana, ry zalahy, ny alarobia lasa teo. Lesoka ho azy ireo ny tsy fahampian’ny fahamatorana. Betsaka ny baolina tokony ho faty, saingy tsy ampy ny fifantohana, nampian’ny fitavozavozan’ny vodilaharana. Ankoatra izay, nampitaraina ny mpanazatra malianina ny fitongilanan’ny mpitsara. Na izany aza, nanokatra ny isa ry zareo Espaniola, teo amin’ny minitra faha-19, tamin’ny alalan’ny pénalty, tafiditr’i Abel Ruiz. Mbola nampiany indray izany, teo amin’ny minitra faha-43, tamin’ny alalan’ny daka mandrivorivo. Nentina niala sasatra io isa, 2 no ho 0 io.
Nisy baolina matin’i Doucouré, ho an’i Mali, teo amin’ny fanombohan’ny fizaram-potoana faharoa, izay nidona tamin’ny tsivalamby ary nilatsaka teo amin’ny tsipiky ny tsatoby, saingy nolavin’ny mpitsara, noho ny tsy fisian’ny «arbitrage vidéo». Kivy tamin’iny ireo mpilalao ka toa lasa niraviravy tanana. Vokatr’izany, nahatafiditra baolina fahatelo indray ny Espaniola, teo amin’ny minitra faha-72, tamin’ny alalan’ny lohan’i Ferran. 2 mn taorian’io, nampihena ny isa, i Ndiaye. Teo amin’ny fihaonana iray, lavon’i Angletera, tamin’io isa 3 no ho 1 io koa ny Brezilianina. Hiady ny medaly alimo izany i Mali sy i Brezila ary medaly volamena ny hikatrohan’i Espaina sy i Angletera. Lalao hotanterahina ny asabotsy ho avy izao.